अनौठो घटनाः एक बंगलादेशी महिला जो एक महिनामा दुई पटक सुत्केरी भइन, तीन बच्चा जन्माइन
दुई पाठेघर हुने अवस्थाः सबै बच्चा सकुशल
प्रकासित मिति : २०७५ चैत्र १४, बिहीबार प्रकासित समय : १८:५२
बंगलादेश । पत्याउन गाह्रो तर सत्य घटना, एकजना बांग्लादेशी महिला एक महिनाको अन्तरालमा दुई पटक सुत्केरी भएकी छन । उनले समय अगावै एउटा छोरा जन्माएको र त्यसको झण्डै एक महिनापछि अर्को जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी हुन ।
त्यसको २६ दिनपछि नै उनलाई पेट दुखेपछि जेसोर जिल्लास्थित अद्दीन अस्पतालमा लगिएको थियो। जब बिरामीलाई ल्याइयो हामीले उनको अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण गर्यौँ र उनको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा भएको थाहा पायौँ, उनको उपचार गरेकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. शीला पोद्दारले बताइन्।
उनले भनिन्, यो घटनाबाट हामी एकदमै स्तब्ध र आश्चर्यचकित भएका छौँ। मैले यसअघि यस्तो घटना कहिल्यै देखेको थिइनँ। आरिफा सुल्ताना र उनका पति एकदमै गरिब भएकाले उनी गर्भवती भएका बेलामा पनि पहिले अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण गरिएको थिएन।
सुत्केरी आमा र जुम्ल्याहा बच्चाहरूलाई चार दिनको अस्पताल बसाइपछि मार्च २५ तारिखमा घर पठाइएको थियो।सिंगापुरस्थित एकजना स्त्रीरोग विशेषज्ञका अनुसार महिलामा दुईवटा पाठेघर हुने अवस्था मानिसहरूले सोचेजस्तो दुर्लभ भने होइन।
यदि पहिले नै गर्भवती अवस्थामा अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण गरिएको भए दुईवटा पाठेघर स्पष्ट देखिने थियो, गाइनेएमडी संस्थाका डा. क्रिस्टोफर ङले बताएका छन्।
उनी भन्छन्, गर्भधारणका बेला महिलामा तीनवटा डिम्ब उत्पन्न भएको र ती तीनैवटा एकैपटक निषेचित हुन पुगेका हुनसक्छ र परिणाम स्वरूप तीनवटा भ्रूणहरू तयार भएको हुनसक्छ।
आफ्ना बच्चाहरू देखेर आफूलाई साह्रै खुशी लागेको सुल्तानाले बताइन् तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण तिनीहरूलाई हुर्काउन आफूहरूलाई गाह्रो हुने उनको भनाइ रहेको एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।
उनका पतिले भने, यो अल्लाहको चमत्कार हो की मेरा बच्चाहरू स्वस्थ छन्। म तिनीहरूलाई खुशी राख्‍न सबै प्रयास गर्नेछु। बीबीसीबाट